6 Xildhibaan oo maanta lagu doortay Magaalada Kismaayo | Universal Somali TV
6 Xildhibaan oo maanta lagu doortay Magaalada Kismaayo
Lix ka mid ah kuraasta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa maanta lagu doortay Magaalada Kismaayo ee Xarunta KMG Jubbaland.
Cumar Ibraahim Xaashi ayaa ku guuleystay kursiga uu tirsigiisu yahay #HOP114, ka dib markii 80 cod uu kaga adkaaday musharaxii la tartamayay, oo lagu magacaabo Cabdi Aadan Cabdullaahi, kaasoo isna helay 12 cod.
Ergada oo guda gashay kursigii xigay ayaa waxaa qaab gacantaag ah ugu guuleystay Maxamed Sheekh Nuur Cismaan, markii uu tanaasulay musharaxii tartanka kula jiray waa Xasan Cismaan Aadan. Maxamed Sheekh ayaana ku guuleystay kursiga ku calaamadeysan #HOP107.
Kursigii xigay oo tirsigiisu ahaa #HOP120 ayaa waxaa ku guuleystay musharax lagu magacaabo Asad Cabdirisaaq Maxamed. Asad ayaa helay 77 cod, halka musharax Saciid Cabdulqaadir Shukri oo la tartamayay uu helay 18 cod.
Wasiirka Kalluumeysiga Jubbaland, Cabaas Cali Ibraahim ayaa ka mid noqday Xildhibaanada Golaha Shacabka, ka gadaal markii kursiga #HOP111 uu kaga guuleystay musharax lagu magacaabo Aadan Mursal Caddow. Wasiir Cabaas ayaa helay 79 cod, halka musharax Caddow uu isna helay 17 cod.
Musharax Cabdinuur Cali Aadan ayaa waxa uu ku guuleystay kursiga #HOP028, ka dib markii uu tanaasulay Axmed Cabdi Maxamed oo lagu waday inuu la tartamo.
Kursigii ugu dambeeyay oo tirsigiisu ahaa #HOP093 ayaa waxaa hantay Dr. Saciid Maxamed Cali oo helay 74 cod, iyadoo musharaxii la tartamayay oo lagu magacaabo Mahad Nuur Cismaan uu helay 24 cod, halka 3 cod ay xumaadeen.
28-kii bishii December ayay ahayd markii Magaalada Kismaayo lagu doortay lix Xildhibaan, waana markii ugu horeysay oo Jubbaland ka bilaabatay Doorashada Xildhibaanada Golaha Shacabka.
Kan-xigaAxmed Madoobe oo soo dhaweeyay go&#03...
Kan-hore6 Xildhibaan oo maanta lagu doortay M...
64,701,376 unique visits